Superficial amendment leaves Broadcasting Law undemocratic — အပျေါယံပွငျဆငျခကျြက ရုပျသံလှငျ့ဥပဒအေား ဒီမိုကရစေီနညျးမကဖြွဈစေ သညျ – Free Expression Myanmar
Sep 13, 2018 by Coordinator	in News သတငျး
The newly adopted Broadcasting Law Amendment (2018) contains only superficial change, fails to protect freedom of expression, and reflects the government’s lack of open consultation.
After entering government in 2016, the NLD quickly announced its intention to amend the Broadcasting Law. Since 2017, there have been rumours that the government has consulted with private companies already holding broadcast agreements, and with international sources. However, the Ministry of Information and Parliament have held no openconsultations with Myanmar civil society.
In summary, thisBroadcasting Law is not suitable forademocracy and needs amending to remove government-controlled channels and protect the independence of the regulator. The Broadcasting Law also needs to explain how Myanmar will move to digital broadcasting.
Articles 2(h), 4(b), 38(d) and 61-62 keep government broadcasters. Article 2(h) defines government broadcasters, not limited to only those run by the Ministry of Information.Article 4(b) says that government broadcasters will be kept alongside public-service, community and commercial broadcasters. Article 38(d) gives government broadcasters licences for up to 10 years. Article 61-62 say that the government broadcasters will be funded byamixture of government budget and advertising.
အသဈရေးဆှဲပွဌာနျးလိုကျသော ရုပျမွငျသံကွားနှငျ့ အသံထုတျလှငျခွငျးဆိုငျရာ ဥပဒကေို ပွငျဆငျသညျ့ ဥပဒေ (၂၀၁၈) တှငျ အပျေါယံပွငျဆငျခကျြမြားသာ ပါဝငျပွီး၊ လှတျလပျစှာထုတျဖျောရေးသားပွောဆိုခှငျ့ကို ကာကှယျရနျ ပကျြကှကျလကျြရှိကာ၊ အစိုးရ၏ ပှငျ့လငျးပွီးအမြားပါဝငျသော ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးမှု ကငျးမဲ့ခဲ့ခွငျးကို ထငျဟပျလကျြရှိသညျ။
Download PDF >>(Zaw gyi below.)
ပွငျဆငျသညျ့ဥပဒသေညျ ရုပျသံလှငျ့မီဒီယာအတှကျ ဥပဒမေူဘောငျအရ ထိရောကျသညျ့ ပွငျဆငျခကျြ နှဈခုကိုသာ ပွုလုပျခဲ့သညျ။ တဈခုမှာ လှတျလပျစှာထုတျဖျောရေးသားပွောဆိုခှငျ့အတှကျ အပေါငျးလက်ခဏာဆောငျပွီး၊ တဈခုမှာ အနှုတျသဘောဆောငျလသေညျ။
၁) လှတျလပျစှာထုတျဖျောရေးသားပွောဆိုခွငျးအတှကျအပေါငျးလက်ခဏာ- ပွငျဆငျလိုကျသညျ့ ပုဒျမ ၅၁ အရ မီဒီယာအား လူပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ ကုမ်ပဏီမြားမှ လကျဝါးကွီးအုပျနိုငျခအြေန်တရာယျကို လြော့ခနြိုငျပလေိမျ့မညျ။ ရုပျသံလှငျ့လှိုငျးနှုနျးစဉျမြားမှာ လူထုပိုငျဆိုငျမှုဖွဈပွီး၊ ထို့ကွောငျ့ပငျ လူထု၏မတူကှဲပွားသောလိုအပျခကျြနှငျ့ အမွငျမြားအတှကျ လိုငျစငျမြားကို ထုတျပေးသငျ့သညျ။ လူအနညျးငယျနှငျ့ ကုမ်ပဏီအခြို့ကွားတှငျသာ ပိုငျဆိုငျမှုမြားရှိနခွေငျးမှာ ယငျးမတူကှဲပွားမှုကို ခြိုးနှိမျရာရောကျလသေညျ။ ပွငျဆငျခကျြအရ “၁၀၀% ပိုငျဆိုငျမှု” အစား “လှမျးမိုးပိုငျခှငျ့”နှငျ့ အစားထိုးထားရာ၊ မီဒီယာလကျဝါးကွီးအုပျမှုကို သတျမှတျခွငျးနှငျ့ တားဆီးခွငျးတှငျ ဘကျစုံထောငျ့စုံမှခငျြ့ခြိနျနိုငျကာ ပိုမိုထိရောကျစသေညျ။
၂) လှတျလပျစှာထုတျဖျောရေးသားပွောဆိုခွငျးအတှကျ အနှုတျလက်ခဏာ- ပုဒျမ ၁၄ (ဎ) တှငျ “ယာယီလိုငျစငျ” ကို ဖနျတီးလိုကျခွငျးက ရုပျသံလှငျ့သမားမြားအနဖွေငျ့ မိမိကိုယျကိုဆငျဆာထိနျးခြုပျခွငျးနှငျ့ ၎င်းငျးတို့ ရုပျသံလိုငျးမြားတှငျ လုံလောကျမှုမရှိစှာရငျးနှီးမွှုပျနှံခွငျးတို့ကို ဖွဈစနေိုငျသညျ။ ပုံမှနျရုပျသံလှငျ့လိုငျစငျက အစိုးရတာဝနျခံမှုအား ခြုပျကိုငျနိုငျသညျ့ အကွောငျးအရာမြားထညျ့သှငျးရနျ ရုပျသံလှငျ့လုပျငနျးလုပျကိုငျသူမြားကို လှတျလပျမှုရှိစပွေီး၊ ရညျရှညျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျနသေညျ့ အရညျအသှေးပွညျ့မီသော အစီအစဉျမြားဖျောဆောငျရာတှငျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံစှမျးရှိစသေညျ။ ရတေိုလိုငျစငျကွောငျ့ ရုပျသံလှငျ့လုပျငနျး လုပျကိုငျသူမြားအနဖွေငျ့ အစိုးရနှငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ ရငျးနှီးဆကျဆံရေးကို ထိခိုကျစမေညျ့ အကွောငျးအရာမြားကို ဖွတျခစြနေိုငျသလို၊ ကွျောငွာမြားမှ မွနျဆနျသညျ့အကြိုးအမွတျရရှိရနျအတှကျ ရညျရှယျသညျ့ အရညျအသှေးနိမျ့သောအစီစဉျမြားကိုသာ ပွုလုပျဖနျတီးလာနိုငျသညျ။
၂၀၁၆ ခုနှဈတှငျ အစိုးရဖွဈပွီးနောကျ ရုပျသံလှငျ့ဥပဒကေိုပွငျဆငျရနျရညျရှယျခကျြကိုNLD မှ လငျြမွနျစှာကွညောခဲ့သညျ။ ၂၀၁၇ ခုနှဈကတညျးက အစိုးရသညျ ရုပျသံလှငျ့ရနျသဘောတူညီမှုရထားပွီး၊ လုပျကိုငျနပွေီးဖွဈသော ပုဂ်ဂလိက ကုမ်ပဏီမြား၊ နိုငျငံတကာအရငျးမွဈမြားနှငျ့ ဆှေးနှေးနသေညျဟု ကောလဟာလမြား ထှကျပျေါခဲ့သညျ။ သို့သျောလညျး ပွနျကွားရေးဝနျကွီးဌာနနှငျ့ လှတျတျောမှ မွနျမာနိုငျငံရှိအရပျဖကျလူမှုအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ပှငျ့လငျးမွငျသာပွီး၊အမြားပါဝငျသော ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးခွငျးမြား ပွုလုပျခဲ့ခွငျး မရှိပါ။
၂၀၁၇ခုနှဈတှငျ FEM မှ မွနျမာနိုငျငံ၏ ရုပျသံလှငျ့ဥပဒကေို နိုငျငံတကာစံနှုနျးမြားနှငျ့ ယှဉျထိုးသုံးသပျခဲ့ပွီး၊ အောကျပါအကွံပွုခကျြမြားကို ပွုလုပျခဲ့သညျ။ သို့သျော ပွငျဆငျသညျ့ဥပဒတှေငျ ယငျးတို့ကို ထညျ့သှငျးခံခဲ့ရခွငျးမရှိပါ။ အထူးသဖွငျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအမီ နိုငျငံရေးပါတီမြား၊ ကိုယျစားလှယျမြား၊ မူဝါဒမြားအကွောငျး သတငျးအခကျြအလကျမြားကို ပွညျသူ့ထံ လှတျလှတျလပျလပျမြှမြှတတပေးနိုငျရနျ ရုပျသံလှငျကဏ်ဍကို ပွငျဆငျရနျ FEM မှ အစိုးရကို တိုကျတှနျးခဲ့သညျ။
အနှဈခြုပျဆိုရလြှငျ ယခုရုပျသံလှငျ့ဥပဒသေညျ ဒီမိုကရစေီအတှကျ မသငျ့လြျောဘဲ၊ အစိုးရထိနျးခြုပျနသေညျ့ ရုပျသံလှငျ့လိုငျးမြားကို ပယျဖကျြရနျနှငျ့ ထိနျးခြုပျရေးအဖှဲ့၏ လှတျလပျအမှီအခိုကငျးမှုကို ကာကှယျပေးရနျ ပွငျဆငျခကျြမြား လိုအပျနသေညျ။ လကျရှိရုပျသံလှငျ့ဥပဒအေနဖွေငျ့ ဒဈဂဈြတယျရုပျသံလှငျ့ပုံစံသို့ မညျသို့မညျပုံကူးပွောငျးမညျကို ရှငျးပွရနျလညျး လိုအပျနပေါသညျ။
ပုဒျမ ၂(ဇ)၊ ၄(ခ)၊ ၃၈(ဃ)၊ ၆၁ မှ ၆၂ အထိ- အစိုးရပိုငျရုပျသံလှငျ့မီဒီယာမြား
ပုဒျမ ၂(ဇ)၊ ၄(ခ)၊ ၃၈(ဃ) နှငျ့ ပုဒျမ ၆၁ မှ ၆၂ အထိသညျ အစိုးရပိုငျရုပျသံလှငျ့မီဒီယာမြားကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးထားသညျ။ ပုဒျမ၂(ဇ)က အစိုးရရုပျသံလှငျ့မီဒီယာမြားကို အဓိပ်ပါယျသတျမှတျဖျောပွထားပွီး၊ ပွနျကွားရေးဝနျကွီးဌာနမှ လုပျကိုငျနသေော မီဒီယာတဈခုတညျးကိုသာ ရညျညှနျးကနျ့သတျထားခွငျး မဟုတျပေ။ ပုဒျမ ၄(ခ)ကမူ အမြားပွညျသူပိုငျရုပျသံလှငျ့မီဒီယာဝနျဆောငျမှု၊ လူထုအဖှဲ့အစညျးအခွပွေုရုပျသံလှငျ့မီဒီယာ နှငျ့ စီးပှားဖွဈရုပျသံလှငျ့မီဒီယာမြားနှငျ့အတူ အစိုးရရုပျသံလှငျ့မီဒီယာကိုလညျး ဆကျလကျထားရှိသှားမညျဖွဈကွောငျး ပွောထားသညျ။ ပုဒျမ ၃၈(ဃ) အရ အစိုးရရုပျသံလှငျ့မီဒီယာ၏လိုငျစငျသကျတမျးမှာ ၁၀ နှဈအထိ ပေးထားသညျ။ ပုဒျမ ၆၁ နှငျ့ ၆၂ တှငျ အစိုးရမီဒီယာမြားကို အစိုးရဘဏ်ဍာနှငျ့ ကွျောညာခမြားမှ ရောယှကျထောကျပံ့ပေးသှားမညျဟု ဖျောပွထားသညျ။
ဒီမိုကရစေီနိုငျငံတဈခုတှငျ မီဒီယာ၏ အခနျးကဏ်ဍမှာ အစိုးရတာဝနျခံမှုကို ထိနျးကြောငျးနိုငျရနျအလို့ငှာ အစိုးရဘာတှလေုပျဆောငျနသေလဲ ဆိုသညျကို တငျပွရနျနှငျ့ သဘောထားအမွငျပေးရနျ ဖွဈလသေညျ။ အစိုးရမှ ၎င်းငျး၏ ကိုယျပိုငျလုပျဆောငျခကျြမြားနှငျ့ လုပျငနျးဆောငျတာမြားကို ဝဖေနျရနျ မဖွဈနိုငျသဖွငျ့ အစိုးရရုပျသံလှငျ့မီဒီယာမြားအနဖွေငျ့ လှတျလပျပွီးမြှတဖို့ ဖွဈနိုငျခအြေလှနျနညျးပါးလှသညျ။ နိုငျငံတကာစံနှုနျးမြားအရ အစိုးရမြားသညျ ရုပျသံလှငျ့မီဒီယာအပါအဝငျ မညျသညျ့မီဒီယာကိုမှ မထိနျးခြုပျထားသငျ့ကွောငျး ဖျောပွထားပွီး ဖွဈသညျ။
ပုဒျမ ၂(ဇ)၊ ၄(ခ)၊ ၃၈(ဃ) နှငျ့ ပုဒျမ ၆၁ မှ ၆၂အထိကို ပယျဖကျြပွီး၊ အစိုးရပိုငျရုပျသံလှငျ့မီဒီယာမြားအားလုံးကို အမြားပွညျသူဝနျဆောငျမှုရုပျသံလှငျ့မီဒီယာ အဖွဈသို့ ပွောငျးလဲပါ။
ပုဒျမ ၅ မှ ၃၀ အထိ - ရုပျသံလှငျ့မီဒီယာထိနျးကြောငျးရေး၏ လှတျလပျအမှီအခိုကငျးမှု
ပုဒျမ ၅ မှ ၆ သညျ ဝနျကွီး ၁ ဦး၊ ဒုဝနျကွီး ၄ ဦး နှငျ့ အစိုးရစီနီယာအရာရှိ ၄ ဦးအပါအဝငျ စုစုပေါငျးအဖှဲ့ဝငျ ၁၃ ဦးပါဝငျသော ရုပျသံလှငျ့အာဏာပိုငျအဖှဲ့ကို ဖနျတီးထားသညျ။ ၎င်းငျးအဖှဲ့က ရုပျသံလှငျ့မူဝါဒမြား၊ လှိုငျးနှုနျးစဉျစီမံကွီးကွပျမှုမြားနှငျ့ ပတျသတျ၍ ရုပျသံလှငျ့မီဒီယာကောငျစီကို အကွံပေးမညျဖွဈသညျ။ ပုဒျမ ၇ မှ ၃၀ အထိက ရုပျသံလှငျ့ကောငျစီကို ဖနျတီးထားပွီး၊ ၎င်းငျးမှ လိုငျစငျကို ကွီးကွပျကာ ရုပျသံလှငျ့သူမြားအတှကျ ကငျြ့ဝတျမြားကို ရေးဆှဲရမညျဖွဈသညျ။ ပုဒျမ ၁၂ က ပွောထားသညျမှာ သမ်မတ၊ အထကျလှတျတျော အောကျလှတျတျော ဥက်ကဌတို့မှ စာရငျးပေးသှငျးထားသော လူပုဂ်ဂိုလျ ၁၈ ဦးမှ ကောငျစီဝငျ ၉ ဦးကို သမ်မတမှ ရှေးခယျြခနျ့ထားရနျဖွဈသညျ။ ကောငျစီအဖှဲ့ဝငျမြားအမှားပွုလုပျလြှငျ သမ်မတမှ ဖွုတျခပြဈနိုငျကွောငျး ပုဒျမ ၁၈က ပွောထားသညျ။ ရုပျသံလှငျ့လုပျငနျးရှငျမြားနှငျ့ လူတဈဦးခငျြးသညျ ကောငျစီ၏ ဆုံးဖွတျခကျြကို မကနြေပျလြှငျ သမ်မတသို့တငျပွ အသနားခံနိုငျကွောငျး ပုဒျမ ၉၁ မှ ပွဌာနျးထားသညျ။
ရုပျသံလှငျ့မီဒီယာစညျးကမျးထိနျးသိမျးရေးအဖှဲ့သညျ မီဒီယာလှတျလပျခှငျ့ကို ကာကှယျရနျ အစိုးရထိနျးခြုပျမှုမှ လှတျလပျအမှီအခိုကငျးရနျ လိုအပျသညျ။ သို့သျောလညျး အာဏာပိုငျအဖှဲ့သညျ အမြားအားဖွငျ့ အစိုးရအရာရှိမြားဖွဈကွပွီး၊ ရုပျသံလှငျ့ကောငျစီအဖှဲ့ဝငျမြားကိုလညျး အစိုးရမှရှေးခယျြခနျ့အပျရမညျဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ နှဈဖှဲ့လုံးမှာ လှတျလပျမှု မရှိကွပေ။ အစိုးရမှ အလှယျတကူထိနျးခြုပျနိုငျစသေော ဝဝေါးလှသညျ့ အကွောငျးပွခကျြမြားနှငျ့ သမ်မတမှ အာဏာပိုငျအဖှဲ့နှငျ့ ကောငျစီဝငျအမြားစုကို ရာထူးမှဖွုတျပယျပဈလိုကျနိုငျသညျ။ ကောငျစီမှခမြှတျလိုကျသညျ့ မညျသညျ့ဆုံးဖွတျခကျြမဆို သမ်မတဆီသို့ အသနားခံခွငျးအားဖွငျ့ နောကျပွနျလညျနမေညျဖွဈကာ၊ ယငျးက ကောငျစီကို အလုပျလကျမဲ့ဖွဈစသေညျ။ နိုငျငံတကာစံနှုနျးမြားအရ ရုပျသံလှငျ့လုပျငနျးစညျးကမျးထိနျးသိမျးရေးအဖှဲ့မြားသညျ လူ့အဖှဲ့အစညျး၏ ကိုယျစားလှယျမြားဖွဈသငျ့သျောလညျး၊ ယခုဥပဒမှောမူ မတူကှဲပွားသညျ့ ကိုယျစားပွုမှုမြားကို အာမခံပေးထားခွငျး မရှိပါ။ ပုဒျမ ၇(ခ)သညျ အမှနျတကယျတမျး နိုငျငံသားမဟုတျသညျ့ မိဘမြား၏ သားသမီးမြားကို ဥပဒကွေောငျးအရမညီညှတျစှာ ခှဲခွားနှိမျခဆြကျဆံခွငျးပငျဖွဈသညျ။
ပုဒျမ ၅မှ ၆ အထိကို ဖကျြသိမျးပွီး၊ အာဏာပိုငျတို့၏ ဆုံးဖွတျခကျြခပြိုငျခှငျ့အာဏာမြားကို ရပျတံ့ရနျ။
ကောငျစီသညျ အစိုးရမှ ကငျးလှတျအမှီအခိုကငျးသငျ့ကွောငျးနှငျ့ ကောငျစီအဖှဲ့ဝငျမြားကို မညျသူကမြှ လှမျးမိုးခွငျးမပွုသငျ့ကွောငျး ပုဒျမအသဈတဈခုကို ပုဒျမ ၇ ရှတှေ့ငျ ထညျ့သှငျးရေးဆှဲပါ။
မိဘမြားမှ နိုငျငံသားဖွဈရနျလိုအပျသညျ့ လိုအပျခကျြကို ပယျဖကျြခွငျးအားဖွငျ့ ပုဒျမ ၇(ခ) ကို ပွငျဆငျပါ။
ကောငျစီဝငျမြားကို အရပျဖှဲ့လူမှုအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ လှတျတျောမှ ရှေးခယျြတငျမွှောကျနိုငျပွီး၊ မွနျမာနိုငျငံရှိ မတူကှဲပွားမှုမြားကို ယငျးကောငျစီဝငျမြားမှ ကိုယျစားပွုနိုငျစရေနျ ပုဒျမ ၉ မှ ၁၂ အထိ ပွငျဆငျပါ။
ကောငျစီဝငျမြားကို ကောငျစီ၏ အရညျအသှေးပွညျ့ဝသညျ့ ကောငျစီဝငျအမြားစုမှသာ ဖွုတျခနြိုငျပွီး၊ တရားရုံးသို့ အယူခံဝငျနိုငျစရေနျ ပုဒျမ ၁၈ ကို ပွငျဆငျပါ။
ပုဒျမ ၇၅ မှ ၉၁ အထိ - ရုပျသံလှငျ့မီဒီယာကငျြ့ဝတျနှငျ့ တိုငျကွားရေးယန်တရား
ပုဒျမ ၇၅ မှ ၉၁ အထိသညျ ပွသနာရပျမြားကို ကွားနာရနျနှငျ့ ဖွရှေငျးရနျအတှကျ ကောငျစီအတှငျး တိုငျကွားရေးယန်တရားတဈခုကို ပွဌာနျးထားသညျ။ ဟနျခကျြညီမြှခွငျးနှငျ့ ကွားနခွေငျး၊ အသကျအုပျစုခှဲခွားသတျမှတျခွငျး၊ ပုဂ်ဂိုလျရေးလုံခွုံခှငျ့၊ ကွျောညာစံနှုနျးမြားပါဝငျသညျ့ ကိုယျ့ကငျြ့တနျဖိုးမြားကို အခွခေံသော ကငျြ့ဝတျစညျးကမျးကိုပုဒျမ ၇၅ မှ ၇၈(က) အထိ ပုဒျမမြားတှငျ ဖနျတီးပွုစုထားသညျ။ ပုဒျမ ၇၈(ခ) မှ ၈၃ အထိသညျ ကောငျစီအနဖွေငျ့ ကငျြ့ဝတျဖောကျဖကျြသော ရုပျသံလှငျ့သူမြားအကွောငျး တိုငျကွားခကျြမြားကို ကွားနာရနျ ကောငျစီအတှငျး အဖှဲ့တဈခုကို ပွဆိုထားသညျ။ ကောငျစီမှ သတိပေးရနျ၊ သတိပေးခကျြထုတျပွနျရနျ၊ မှားယှငျးသောဖျောပွခကျြမြားကို အမှနျပွငျဆငျရနျ၊ တုံ့ပွနျခှငျ့ကိုပေးရနျ ပုဒျမ ၈၁ မှ ၈၆ အထိသညျ ကောငျစီအား အာဏာပေးထားသညျ။ ကောငျစီမှ ရုပျသံလှငျ့လုပျငနျးလုပျကိုငျသူမြားကို သတိပေးခကျြ၊ အုပျခြုပျရေးငှဒေဏျ၊ သို့မဟုတျ လိုငျစငျယာယီရပျဆိုငျးခွငျး (သို့မဟုတျ) လိုငျစငျအမွဲရပျဆိုငျးခွငျးတို့ ပါဝငျသညျ့ ပွဈဒဏျမြားခမြှတျနိုငျကွောငျး ပုဒျမ ၈၇ မှ ၉၁ အထိက ပွောထားသညျ။
ရုပျသံလှငျ့မီဒီယာကငျြ့ဝတျမြားသညျ နိုငျငံတျော၏ စိတျဓာတျရေးရာ နှငျ့ ကိုယျကငျြ့တနျဖိုးမြားထကျစာလငျြ နိုငျငံတကာပရျောဖကျရှငျနယျကိုယျကငျြ့တရားဆိုငျရာစညျးမဉျြးမြားနှငျ့ လှတျလပျစှာထုတျဖျောပွောဆိုရေးသား ခွငျးအပျေါတှငျ အခွပွေုသငျ့သညျ။အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော စိတျပိုငျးဆိုငျရာကငျြ့ဝတျသညျ လူတဈဦးခငျြးအပျေါမူတညျနသေောကွောငျ့ မကွာခဏဆိုသလို ဝဝေါးပွီး ဓမ်မဓိဌာနျမကဖြွဈကာ၊ ကောငျစီအနဖွေငျ့ အစီစဉျမကသြညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြမြားပွုလုပျခွငျးကို ဖွဈပျေါစနေိုငျသညျ။ တိုငျကွားရေးယန်တရားသညျ ဥပဒတှေငျ ရှငျးလငျးပွတျသားစှာရေးသားထားသညျ့ အမှုကို ကွားနာပိုငျခှငျ့၊ ဆုံးဖွတျခကျြမြား ခမြှတျရသညျ့ အခြိနျပမာဏ၊ ဆုံးဖွတျခကျြကို ရှငျးလငျးပွတျသားစှာဆကျသှယျပေးသညျ့ ဖွဈစဉျ၊ နှငျ့ တရားရေးအရ (သမ်မတဆီမှ မဟုတျဘဲ) အသနားခံလြှောကျထားသညျ့ ရှငျးလငျးသော အစီအစဉျမြားပါဝငျသော အထှထှေစေညျးမဉျြးမြားကို လိုကျနာရမညျဖွဈကွောငျး နိုငျငံတကာစံနှုနျးမြားက ပွောထားသညျ။
ကွျောငွာအကွောငျးတိုငျကွားခကျြမြားကို ကွားနာရာတှငျ ကောငျစီ၏ တိုငျကွားရေးယန်တရားကို တာဝနျယူမှုရှိစရေနျ ပုဒျမ ၇၂ ကို ပွငျဆငျပါ။
နိုငျငံတကာပရျောဖကျရှငျနယျကိုယျကငျြ့တရားမြားနှငျ့ လှတျလပျစှာထုတျဖျောရေးသားပွောဆိုခွငျးကို ပုဒျမ ၇၅ (က) တှငျ ထညျ့သှငျးဖျောပွပါ။
အမှုကွားနာခှငျ့၊ ဆုံးဖွတျခကျြမြားအတှကျ အခြိနျပမာဏ၊ ဆုံးဖွတျခကျြအကွောငျး ရှငျးလငျးသညျ့ ဆကျသှယျပွောဆိုခွငျးဖွဈစဉျ နှငျ့ တရားဥပဒကွေောငျးအရသုံးသပျမှုမြားအတှကျ ရှငျးလငျးတိကသြညျ့ အသနားခံခွငျးအစီအစဉျမြားကို ထညျ့သှငျးရနျ ပုဒျမ ၇၉ ကို ပွငျဆငျပါ။
ရုပျသံလှငျ့ဥပဒမြေားတှငျ ပုံမှနျပါရှိရမညျ့ ပုဒျမမြား ယခုဥပဒတှေငျ ပြောကျနသေညျ။
ရုပျသံလှငျ့ဥပဒမြေားတှငျ နိုငျငံရေးပါတီမြားနှငျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား၏ မူဝါဒနှငျ့ အမွငျအယူအဆမြားအကွောငျး ဆကျသှယျပွောဆိုခှငျ့ကို အာမခံခကျြပေးထားပွီး၊ မီဒီယာ၏ လှတျလပျစှာသတငျးတငျပွခှငျ့နှငျ့ ဆန်ဒမဲပေးသူမြားမှ မတူညီသောအမွငျမြားအား ကွားသိပိုငျခှငျ့ကိုလညျး အာမခံခကျြပေးသညျ့ ရှေးကောကျပှဲစညျးမဉျြးမြားကို ထညျ့သှငျးဖျောပွသငျ့ကွောငျး နိုငျငံတကာစံနှုနျးမြားက ပွောထားသညျ။ ဤအာမခံခကျြမြားတှငျ ရှေးကောကျပှဲကငျမျပိနျးမြား၊ သတငျးဖျောပွမှု၊ နိုငျငံရေးပါတီမြားအတှကျ သကျဆိုငျရာမူဝါဒမြားကို ရှငျးလငျးပွောကွားနိုငျမညျ့ ရုပျသံထုတျလှငျ့ခြိနျ နှငျ့ မဲပေးမှုဆိုငျရာပညာပေးအစီစဉျမြားကို လညျး ထညျ့သှငျးရမညျဖွဈသညျ။ ရုပျသံလှငျ့ဥပဒမြေားသညျ Analogue မှ ဒဈဂဈြတယျနညျးပညာသို့ အရှအေ့ပွငျ၊ ပွညျသူမြားမှ ရုပျသံလှငျ့မီဒီယာကို ဆကျလကျလကျလှမျးမှီနနေိုငျစရေနျ အှနျလိုငျးမီဒီယာနှငျ့ ခြိတျဆကျနသေညျ့ ဒဈဂဈြတယျဆုံမှတျ(convergence) ကိုပါ လှမျးခွုံဖျောပွသငျ့ကွောငျး နိုငျငံတကာစံနှုနျးမြားမှ ဆိုထားသေးသညျ။
ရှေးကောကျပှဲကာလအတှငျး ရုပျသံလှငျ့မီဒီယာအခှငျ့အရေးမြားအား အာမခံခကျြပေးထားသညျ့ ပုဒျမကို ထညျ့သှငျးပါ။
Analogueမှ ဒဈဂဈြတယျရုပျသံလှငျ့သို့အရှတှေ့ငျ ကယျြပွနျ့သညျ့ဆှေးနှေးမှုလိုအပျကွောငျး ပုဒျမတဈခုကို ထညျ့သှငျးရေးဆှဲပါ။ ယငျးပုဒျမသညျ လကျလှမျးမီရပိုငျခှငျ့နှငျ့ မတူကှဲပွားမှု စညျးမဉျြးမြားကို လိုကျနာသငျ့ပါသညျ။
အပေါ်ယံပြင်ဆင်ချက်က ရုပ်သံလွှင့်ဥပဒေအား ဒီမိုကရေစီနည်းမကျဖြစ်စေ သည်
အသစ်ရေးဆွဲပြဌာန်းလိုက်သော ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၈) တွင် အပေါ်ယံပြင်ဆင်ချက်များသာ ပါဝင်ပြီး၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးသားပြောဆိုခွင့်ကို ကာကွယ်ရန် ပျက်ကွက်လျက်ရှိကာ၊ အစိုးရ၏ ပွင့်လင်းပြီးအများပါဝင်သော ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု ကင်းမဲ့ခဲ့ခြင်းကို ထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်။
ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေသည် ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာအတွက် ဥပဒေမူဘောင်အရ ထိရောက်သည့် ပြင်ဆင်ချက် နှစ်ခုကိုသာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုမှာ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးသားပြောဆိုခွင့်အတွက် အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ပြီး၊ တစ်ခုမှာအနှုတ်သဘောဆောင်လေသည်။
၁) လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးသားပြောဆိုခြင်းအတွက်အပေါင်းလက္ခဏာ- ပြင်ဆင်လိုက်သည့် ပုဒ်မ ၅၁ အရ မီဒီယာအား လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ကုမ္ပဏီများမှ လက်ဝါးကြီးအုပ်နိုင်ချေအန္တရာယ်ကို လျော့ချနိုင်ပေလိမ့်မည်။ ရုပ်သံလွှင့်လှိုင်းနှုန်းစဉ်များမှာ လူထုပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့်ပင် လူထု၏မတူကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်နှင့် အမြင်များအတွက် လိုင်စင်များကို ထုတ်ပေးသင့်သည်။ လူအနည်းငယ်နှင့် ကုမ္ပဏီအချို့ကြားတွင်သာ ပိုင်ဆိုင်မှုများရှိနေခြင်းမှာ ယင်းမတူကွဲပြားမှုကို ချိုးနှိမ်ရာရောက်လေသည်။ ပြင်ဆင်ချက်အရ“၁၀၀% ပိုင်ဆိုင်မှု” အစား “လွှမ်းမိုးပိုင်ခွင့်” နှင့် အစားထိုးထားရာ၊ မီဒီယာလက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် တားဆီးခြင်းတွင် ဘက်စုံထောင့်စုံမှချင့်ချိန်နိုင်ကာ ပိုမိုထိရောက်စေသည်။
၂) လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးသားပြောဆိုခြင်းအတွက် အနှုတ်လက္ခဏာ - ပုဒ်မ ၁၄ (ဎ) တွင် “ယာယီလိုင်စင်” ကို ဖန်တီးလိုက်ခြင်းက ရုပ်သံလွှင့်သမားများအနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုဆင်ဆာထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ၄င်းတို့ ရုပ်သံလိုင်းများတွင် လုံလောက်မှုမရှိစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပုံမှန်ရုပ်သံလွှင့်လိုင်စင်က အစိုးရတာဝန်ခံမှုအား ချုပ်ကိုင်နိုင်သည့် အကြောင်းအရာများထည့်သွင်းရန် ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများကို လွတ်လပ်မှုရှိစေပြီး၊ ရည်ရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသည့် အရည်အသွေးပြည့်မီသော အစီအစဉ်များဖော်ဆောင်ရာတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစွမ်းရှိစေသည်။ ရေတိုလိုင်စင်ကြောင့် ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် အစိုးရနှင့် ၄င်းတို့၏ ရင်းနှီးဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေမည့် အကြောင်းအရာများကို ဖြတ်ချစေနိုင်သလို၊ ကြော်ငြာများမှ မြန်ဆန်သည့်အကျိုးအမြတ်ရရှိရန်အတွက် ရည်ရွယ်သည့် အရည်အသွေးနိမ့်သောအစီစဉ်များကိုသာ ပြုလုပ်ဖန်တီးလာနိုင်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အစိုးရဖြစ်ပြီးနောက် ရုပ်သံလွှင့်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ကို NLD မှ လျင်မြန်စွာကြေညာခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက အစိုးရသည် ရုပ်သံလွှင့်ရန်သဘောတူညီမှုရထားပြီး၊ လုပ်ကိုင်နေပြီးဖြစ်သော ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံတကာအရင်းမြစ်များနှင့် ဆွေးနွေးနေသည်ဟု ကောလဟာလများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် လွှတ်တော်မှ မြန်မာနိုင်ငံရှိအရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး၊အများပါဝင်သောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။
၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် FEM မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရုပ်သံလွှင့်ဥပဒေကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် ယှဉ်ထိုးသုံးသပ်ခဲ့ပြီး၊ အောက်ပါအကြံပြုချက်များကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေတွင် ယင်းတို့ကို ထည့်သွင်းခံခဲ့ရခြင်းမရှိပါ။ အထူးသဖြင့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအမီ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မူဝါဒများအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များကို ပြည်သူ့ထံ လွတ်လွတ်လပ်လပ်မျှမျှတတပေးနိုင်ရန် ရုပ်သံလွှင်ကဏ္ဍကို ပြင်ဆင်ရန် FEM မှ အစိုးရကို တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
အနှစ်ချုပ်ဆိုရလျှင်ယခုရုပ်သံလွှင့်ဥပဒေသည် ဒီမိုကရေစီအတွက် မသင့်လျော်ဘဲ၊ အစိုးရထိန်းချုပ်နေသည့် ရုပ်သံလွှင့်လိုင်းများကို ပယ်ဖျက်ရန်နှင့် ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းမှုကို ကာကွယ်ပေးရန် ပြင်ဆင်ချက်များ လိုအပ်နေသည်။ လက်ရှိရုပ်သံလွှင့်ဥပဒေအနေဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်သံလွှင့်ပုံစံသို့ မည်သို့မည်ပုံကူးပြောင်းမည်ကို ရှင်းပြရန်လည်း လိုအပ်နေပါသည်။
ပုဒ်မ ၂(ဇ)၊ ၄(ခ)၊ ၃၈(ဃ)၊ ၆၁ မှ ၆၂ အထိ- အစိုးရပိုင်ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာများ
ပုဒ်မ ၂(ဇ)၊ ၄(ခ)၊ ၃၈(ဃ) နှင့် ပုဒ်မ ၆၁ မှ ၆၂ အထိသည် အစိုးရပိုင်ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ပုဒ်မ၂(ဇ)က အစိုးရရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာများကို အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ဖော်ပြထားပြီး၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လုပ်ကိုင်နေသော မီဒီယာတစ်ခုတည်းကိုသာ ရည်ညွှန်းကန့်သတ်ထားခြင်း မဟုတ်ပေ။ ပုဒ်မ ၄(ခ)ကမူ အများပြည်သူပိုင်ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာဝန်ဆောင်မှု၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းအခြေပြုရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာ နှင့် စီးပွားဖြစ်ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာများနှင့်အတူ အစိုးရရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာကိုလည်း ဆက်လက်ထားရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောထားသည်။ ပုဒ်မ ၃၈(ဃ) အရ အစိုးရရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာ၏လိုင်စင်သက်တမ်းမှာ ၁၀ နှစ်အထိ ပေးထားသည်။ ပုဒ်မ ၆၁ နှင့် ၆၂ တွင် အစိုးရမီဒီယာများကို အစိုးရဘဏ္ဍာနှင့် ကြော်ညာခများမှ ရောယှက်ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုတွင် မီဒီယာ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ အစိုးရတာဝန်ခံမှုကို ထိန်းကျောင်းနိုင်ရန်အလို့ငှာ အစိုးရဘာတွေလုပ်ဆောင်နေသလဲ ဆိုသည်ကို တင်ပြရန်နှင့် သဘောထားအမြင်ပေးရန် ဖြစ်လေသည်။ အစိုးရမှ ၄င်း၏ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဝေဖန်ရန် မဖြစ်နိုင်သဖြင့် အစိုးရရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာများအနေဖြင့် လွတ်လပ်ပြီးမျှတဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေအလွန်နည်းပါးလှသည်။ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများအရ အစိုးရများသည် ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာအပါအဝင် မည်သည့်မီဒီယာကိုမှ မထိန်းချုပ်ထားသင့်ကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်သည်။
ပုဒ်မ ၂(ဇ)၊ ၄(ခ)၊ ၃၈(ဃ) နှင့် ပုဒ်မ ၆၁ မှ ၆၂အထိကို ပယ်ဖျက်ပြီး၊ အစိုးရပိုင်ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာများအားလုံးကို အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပါ။
ပုဒ်မ ၅ မှ ၃၀ အထိ - ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာထိန်းကျောင်းရေး၏ လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းမှု
ပုဒ်မ ၅ မှ ၆ သည် ဝန်ကြီး ၁ ဦး၊ ဒုဝန်ကြီး ၄ ဦး နှင့် အစိုးရစီနီယာအရာရှိ ၄ ဦးအပါအဝင် စုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဦးပါဝင်သော ရုပ်သံလွှင့်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကို ဖန်တီးထားသည်။ ၄င်းအဖွဲ့က ရုပ်သံလွှင့်မူဝါဒများ၊ လှိုင်းနှုန်းစဉ်စီမံကြီးကြပ်မှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာကောင်စီကို အကြံပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပုဒ်မ ၇ မှ ၃၀ အထိက ရုပ်သံလွှင့်ကောင်စီကို ဖန်တီးထားပြီး၊ ၄င်းမှ လိုင်စင်ကို ကြီးကြပ်ကာ ရုပ်သံလွှင့်သူများအတွက် ကျင့်ဝတ်များကို ရေးဆွဲရမည်ဖြစ်သည်။ ပုဒ်မ ၁၂ က ပြောထားသည်မှာ သမ္မတ၊ အထက်လွှတ်တော် အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဌတို့မှ စာရင်းပေးသွင်းထားသော လူပုဂ္ဂိုလ် ၁၈ ဦးမှ ကောင်စီဝင် ၉ ဦးကို သမ္မတမှ ရွေးချယ်ခန့်ထားရန်ဖြစ်သည်။ ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များအမှားပြုလုပ်လျှင် သမ္မတမှ ဖြုတ်ချပစ်နိုင်ကြောင်း ပုဒ်မ ၁၈က ပြောထားသည်။ ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် လူတစ်ဦးချင်းသည် ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်လျှင် သမ္မတသို့တင်ပြ အသနားခံနိုင်ကြောင်း ပုဒ်မ ၉၁ မှ ပြဌာန်းထားသည်။
ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကာကွယ်ရန် အစိုးရထိန်းချုပ်မှုမှ လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းရန် လိုအပ်သည်။ သို့သော်လည်း အာဏာပိုင်အဖွဲ့သည် အများအားဖြင့် အစိုးရအရာရှိများဖြစ်ကြပြီး၊ ရုပ်သံလွှင့်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း အစိုးရမှရွေးချယ်ခန့်အပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နှစ်ဖွဲ့လုံးမှာ လွတ်လပ်မှု မရှိကြပေ။ အစိုးရမှ အလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်စေသော ဝေဝါးလှသည့် အကြောင်းပြချက်များနှင့် သမ္မတမှ အာဏာပိုင်အဖွဲ့နှင့် ကောင်စီဝင်အများစုကို ရာထူးမှဖြုတ်ပယ်ပစ်လိုက်နိုင်သည်။ ကောင်စီမှချမှတ်လိုက်သည့် မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်မဆို သမ္မတဆီသို့ အသနားခံခြင်းအားဖြင့် နောက်ပြန်လည်နေမည်ဖြစ်ကာ၊ ယင်းက ကောင်စီကို အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်စေသည်။ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများအရ ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သင့်သော်လည်း၊ ယခုဥပဒေမှာမူ မတူကွဲပြားသည့် ကိုယ်စားပြုမှုများကို အာမခံပေးထားခြင်း မရှိပါ။ ပုဒ်မ ၇(ခ)သည် အမှန်တကယ်တမ်း နိုင်ငံသားမဟုတ်သည့် မိဘများ၏ သားသမီးများကို ဥပဒေကြောင်းအရမညီညွတ်စွာ ခွဲခြားနှိမ်ချဆက်ဆံခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ပုဒ်မ ၅မှ ၆ အထိကို ဖျက်သိမ်းပြီး၊ အာဏာပိုင်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်အာဏာများကို ရပ်တံ့ရန်။
ကောင်စီသည် အစိုးရမှ ကင်းလွတ်အမှီအခိုကင်းသင့်ကြောင်းနှင့် ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကို မည်သူကမျှ လွှမ်းမိုးခြင်းမပြုသင့်ကြောင်း ပုဒ်မအသစ်တစ်ခုကို ပုဒ်မ ၇ ရှေ့တွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲပါ။
မိဘများမှ နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်လိုအပ်သည့် လိုအပ်ချက်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်းအားဖြင့် ပုဒ်မ ၇(ခ) ကို ပြင်ဆင်ပါ။
ကောင်စီဝင်များကို အရပ်ဖွဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လွှတ်တော်မှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မတူကွဲပြားမှုများကို ယင်းကောင်စီဝင်များမှ ကိုယ်စားပြုနိုင်စေရန် ပုဒ်မ ၉ မှ ၁၂ အထိ ပြင်ဆင်ပါ။
ကောင်စီဝင်များကို ကောင်စီ၏ အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် ကောင်စီဝင်အများစုမှသာ ဖြုတ်ချနိုင်ပြီး၊ တရားရုံးသို့ အယူခံဝင်နိုင်စေရန် ပုဒ်မ ၁၈ ကို ပြင်ဆင်ပါ။
ပုဒ်မ ၇၅ မှ ၉၁ အထိ - ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာကျင့်ဝတ်နှင့် တိုင်ကြားရေးယန္တရား
ပုဒ်မ ၇၅ မှ ၉၁ အထိသည် ပြသနာရပ်များကို ကြားနာရန်နှင့် ဖြေရှင်းရန်အတွက် ကောင်စီအတွင်း တိုင်ကြားရေးယန္တရားတစ်ခုကို ပြဌာန်းထားသည်။ ဟန်ချက်ညီမျှခြင်းနှင့် ကြားနေခြင်း၊ အသက်အုပ်စုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံခွင့်၊ ကြော်ညာစံနှုန်းများပါဝင်သည့် ကိုယ့်ကျင့်တန်ဖိုးများကို အခြေခံသော ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းကိုပုဒ်မ ၇၅ မှ ၇၈(က) အထိ ပုဒ်မများတွင် ဖန်တီးပြုစုထားသည်။ ပုဒ်မ ၇၈(ခ) မှ ၈၃ အထိသည် ကောင်စီအနေဖြင့် ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်သော ရုပ်သံလွှင့်သူများအကြောင်း တိုင်ကြားချက်များကို ကြားနာရန် ကောင်စီအတွင်း အဖွဲ့တစ်ခုကို ပြဆိုထားသည်။ ကောင်စီမှ သတိပေးရန်၊ သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ရန်၊ မှားယွင်းသောဖော်ပြချက်များကို အမှန်ပြင်ဆင်ရန်၊ တုံ့ပြန်ခွင့်ကိုပေးရန် ပုဒ်မ ၈၁ မှ ၈၆ အထိသည် ကောင်စီအား အာဏာပေးထားသည်။ ကောင်စီမှ ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများကို သတိပေးချက်၊ အုပ်ချုပ်ရေးငွေဒဏ်၊ သို့မဟုတ် လိုင်စင်ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) လိုင်စင်အမြဲရပ်ဆိုင်းခြင်းတို့ ပါဝင်သည့် ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်နိုင်ကြောင်း ပုဒ်မ ၈၇ မှ ၉၁ အထိက ပြောထားသည်။
ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာကျင့်ဝတ်များသည် နိုင်ငံတော်၏ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ နှင့် ကိုယ်ကျင့်တန်ဖိုးများထက်စာလျင် နိုင်ငံတကာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသား ခြင်းအပေါ်တွင် အခြေပြုသင့်သည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်သည် လူတစ်ဦးချင်းအပေါ်မူတည်နေသောကြောင့် မကြာခဏဆိုသလို ဝေဝါးပြီး ဓမ္မဓိဌာန်မကျဖြစ်ကာ၊ ကောင်စီအနေဖြင့် အစီစဉ်မကျသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များပြုလုပ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ တိုင်ကြားရေးယန္တရားသည် ဥပဒေတွင် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရေးသားထားသည့် အမှုကို ကြားနာပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရသည့် အချိန်ပမာဏ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဆက်သွယ်ပေးသည့် ဖြစ်စဉ်၊ နှင့် တရားရေးအရ (သမ္မတဆီမှ မဟုတ်ဘဲ) အသနားခံလျှောက်ထားသည့် ရှင်းလင်းသော အစီအစဉ်များပါဝင်သော အထွေထွေစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်းနိ်ုင်ငံတကာစံနှုန်းများက ပြောထားသည်။
ကြော်ငြာအကြောင်းတိုင်ကြားချက်များကို ကြားနာရာတွင် ကောင်စီ၏ တိုင်ကြားရေးယန္တရားကို တာဝန်ယူမှုရှိစေရန် ပုဒ်မ ၇၂ ကို ပြင်ဆင်ပါ။
နိုင်ငံတကာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ကျင့်တရားများနှင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးသားပြောဆိုခြင်းကို ပုဒ်မ ၇၅ (က) တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြပါ။
အမှုကြားနာခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် အချိန်ပမာဏ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်း ရှင်းလင်းသည့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်စဉ် နှင့် တရားဥပဒေကြောင်းအရသုံးသပ်မှုများအတွက် ရှင်းလင်းတိကျသည့် အသနားခံခြင်းအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းရန် ပုဒ်မ ၇၉ ကို ပြင်ဆင်ပါ။
ရုပ်သံလွှင့်ဥပဒေများတွင် ပုံမှန်ပါရှိရမည့် ပုဒ်မများ ယခုဥပဒေတွင် ပျောက်နေသည်။
ရုပ်သံလွှင့်ဥပဒေများတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ မူဝါဒနှင့် အမြင်အယူအဆများအကြောင်း ဆက်သွယ်ပြောဆိုခွင့်ကို အာမခံချက်ပေးထားပြီး၊ မီဒီယာ၏ လွတ်လပ်စွာသတင်းတင်ပြခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးသူများမှ မတူညီသောအမြင်များအား ကြားသိပိုင်ခွင့်ကိုလည်း အာမခံချက်ပေးသည့် ရွေးကောက်ပွဲစည်းမျဉ်းများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြသင့်ကြောင်း နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများက ပြောထားသည်။ ဤအာမခံချက်များတွင် ရွေးကောက်ပွဲကင်မ်ပိန်းများ၊ သတင်းဖော်ပြမှု၊ နိုင်ငံရေးပါတီများအတွက် သက်ဆိုင်ရာမူဝါဒများကို ရှင်းလင်းပြောကြားနိုင်မည့် ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ချိန် နှင့် မဲပေးမှုဆိုင်ရာပညာပေးအစီစဉ်များကို လည်း ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ရုပ်သံလွှင့်ဥပဒေများသည် Analogue မှ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသို့ အရွေ့အပြင်၊ ပြည်သူများမှ ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာကို ဆက်လက်လက်လှမ်းမှီနေနိုင်စေရန် အွန်လိုင်းမီဒီယာနှင့် ချိတ်ဆက်နေသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆုံမှတ်(convergence) ကိုပါ လွှမ်းခြုံဖော်ပြသင့်ကြောင်း နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများမှ ဆိုထားသေးသည်။
ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာအခွင့်အရေးများအား အာမခံချက်ပေးထားသည့် ပုဒ်မကို ထည့်သွင်းပါ။
Analogue မှ ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်သံလွှင့်သို့အရွေ့တွင် ကျယ်ပြန့်သည့်ဆွေးနွေးမှုလိုအပ်ကြောင်းပုဒ်မတစ်ခုကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲပါ။ ယင်းပုဒ်မသည် လက်လှမ်းမီရပိုင်ခွင့်နှင့် မတူကွဲပြားမှု စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာသင့်ပါသည်။
Broadcasting Law Amended 2018 English
Broadcasting Law (English)
ရုပျမွငျသံကွားနှငျ့ အသံထုတျလှငျ့ခွငျးဆိုငျရာ ဥပဒပွေဋ်ဌာနျး
Read on Mizzima >>
Tagged with: Broadcasting Council, Broadcasting Law, Community media, Media licensing, Public service media, State media